Kutamba nekitsi diki | Noti Katsi
Maitiro ekutamba nekitsi diki
Bvudzi rebvudzi rakafanana nesiponji: rinotora zvese zvavanodzidzisa, zvakanaka kana zvakaipa. Kana vangokura, havakanganwe zvese zvavakadzidza vachiri vana; ndiko kuti, kana sembwanana tikamurega achitamba nemaoko edu, kana akura anoramba achidaro, nekuti ndizvo zvatakamudzidzisa.
Kuti udzivise izvi, zvakakosha kuti uzive sei kutamba nekitsi diki. Kubudikidza nemutambo isu tichawana kuti mangwana shamwari yedu inova Katsi Mr., inoshamwaridzika, uye yakadzidziswa (tsime, seyakafundwa semukadzi anogona kuva, hongu 🙂).
Kutamba nekatsi kane mwedzi-mudiki mufaro chaiwo. Zvichienderana nezera rako, unogona kuramba uchikanganisa kana uchifamba kana kumhanya, asi iwe unodzidza nekukurumidza uye ndicho chinhu chauchakurumidza kuona. Asi iwe unofanirwawo kuziva ichiri nyore kusimba, saka unofanirwa kunyatso chenjera paunomusimudza (chakanakira kuisa ruoko rumwe pasi peguvhu rake, nekudaro uchitsigira muviri wake mudiki).
Ndeipi nzira yakanakisa yekuva nenguva yekunakidzwa? Chinhu chekutanga kuchengeta mupfungwa ndechekuti haufanire kurega ichikuruma kana kukwenya iwe; kana zvikadaro, mira mutambo ipapo uye tanga kuita zvimwe zvinhu. Munguva pfupi iri kutevera anodzidza kuti kana achikwenya kana kuruma, hapana mutambo, uyezve, chaanoda kutamba, saka anomira kukukuvadza.
Iwe unofanirwa kugara uchiisa toy pakati pako nekatsi.: tambo, mhuka yakaputirwa ... Muzvitoro zvezvipfuyo iwe unowana matoyi mazhinji aunogona kushandisa imwe nguva inoshamisa neshamwari yako, kunyangwe iwe uchigonawo kugadzira matoyi ako epamba. Mupfungwa iyi, yakapfava kadhibhokisi bhokisi rine buri rainogona kubuda richaita kuti shamwari yako ive nenguva yakanaka. Unogona kukochekera tambo kwairi kana iri bhokisi hombe uye refu.
Chii chisingakwanise kushayikwa haisi kamera. Tora idzi nguva dzefeline yako kuti uzviyeuke. Nguva inopfuura nekukurumidza, uye usati waziva, ichave yasvika kuva munhu mukuru.
Uye iwe, unotamba sei nekatsi yako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Maitiro ekutamba nekitsi diki
alba ligia. akadaro
Ndine shungu kwazvo nekuti nezuro ndakawana katsi inofamba ichienda kupurazi zvakanyanya. I called the vetrinarian I injected him nekuti anga aine fever, akabva aenda uye haana kudzoka.
Pindura kune alba ligia.
Ndine hurombo nezvakaitika 🙁
Handizive kana iwe wakazviona izvozvi, asi katsi dzakaomarara kupfuura zvadzinoita.
Nzira yekutarisira katsi dzakadzika
Maitiro ekuti uwane varume vaviri katsi kuti vawirirane
😻 Discounts pane katsi chikafu uye zvishongedzo